News Collection: चपली हाइट किन चल्यो ?
चपली हाइट किन चल्यो ?
‘चपली हाइट’ले सिनेमाका पण्डितहरूलाई समेत चक्मा दिने गरी अनपेक्षित इनिसियल विवरणको सन्देश दिएको छ । ‘लुट’को सर्वाधिक रेकर्डलाई यसले माथ देला वा नदेला तर, ओपनिङमा भने यसले ‘लुट’को रेकर्डलाई तोडिएको छ । यसले शुक्रबार सर्वाधिक ओपनिङ सिंगल डेको ग्रस कलेक्सनको रेकर्ड राख्यो । दोस्रो –दुई दिनमै एउटै मल्टिप्लेक्समा ११ सोजको अर्को रेकर्ड । पोखरा मल्टिप्लेक्समा ‘लुट’ उतारेर समेत ‘चपली हाइट’ प्रदर्शन गरियो । आखिर ‘चपली हाइट’ किन चल्यो ?
समिक्षकहरू ‘चपली हाइट’को आक्रामक ओपनिङ स्वभाविक भएको बताउँछन् । उनीहरू बदलिँदो दर्शकीय मनोविज्ञान र समाजको चरित्र तथा गतिसँग ‘चपली हाइट’लाई विश्लेषण गर्छन् । हामी यहाँ ‘चपली हाइट’ किन चल्यो भन्ने बारेमा केही सैद्धान्तिक र वस्तुगत पक्षको चर्चा गर्दैछौं ।
यौन हिंसातर्फ उन्मुख समाज
समाजशाष्त्रीहरू नेपाली समाज हिंसातर्फ उन्मुख रहेको बताउँछन् । हिंसाका स्वरुपहरूमध्ये यौन तीव्र गतिमा नेपाली समाजमा अघि बढेको पक्ष हो । व्लकबस्टर ‘लुट’ समेत हिंसात्मक सिनेमा थियो । नेपाली सिनेमाका कन्टेन्ट हिजोआज हिंसा, यौन र अपराधको मनोविज्ञानबाट प्रेरित छन् । ‘चपली हाइट’ नेपाली समाजकै वास्तविक घटनामा आधारित सिनेमा हो । भीडको मनोविज्ञान र भीडले मनपराउने हिंसात्मक समाजतर्फको यात्रा ‘चपली हाइट’को प्रदर्शनसँग अभिन्न छ । नेपालजस्तो बन्द समाजमा यौन सर्वाधिक विक्ने कन्टेन्ट हो ।
‘चपली हाइट’ नेपाली सिनेमा इतिहासमा सर्वाधिक विवाद खेपेको सिनेमा हो । यसले सबैभन्दा बढी हिरोइन कन्ट्रोभर्सी खेप्यो । रिलिज नहुँदै सिनेमा र यसको हिरोइन कन्ट्रोभर्सीलाई लिएर मिडियाले लगातार सन्देश प्रवाह गरिरहे । सिनेमाभन्दा पनि हिरोइन र यौनको गसिप र समाचार सर्वाधिक विक्यो । सुटिङ नहुँदै हिरोइनको कन्ट्रोभर्सी, टपलेस कन्ट्रोभर्सी, पोस्टर कन्ट्रोभर्सी, लुगा कन्ट्रोभर्सी, ट्राफिक पुलिस र होर्डिङ बोर्ड कन्ट्रोभर्सी र हिरोइन अंग प्रदर्शनमा उदार भएको कन्ट्रोभर्सी । यी विवादहरू भीडलाई तान्ने चुम्बक बने ।
चपली हाइट : दुई दिनमा ७० लाख ग्रस
‘चपली हाइट’ले प्रदर्शनको दुई दिनमा ७० लाख अलनेपाल ग्रस मार्क गरेर आम्दानीको अर्को कीर्तिमान कायम गरेको छ । नेपाली सिनेमा इतिहासमै दुई दिनमा यति आम्दानी गरिएको यो पहिलो पटक हो । वितरण संस्था डीसीएनले यसको पुष्टि गरेको हो । योसँगै ‘चपली हाइट’ले आफ्नो लगानी उठाएको छ । २७ लाख बजेटको सिनेमालाई लगानी उठाउन ६० लाख ग्रस आवश्यक थियो ।
सिनेमाले पहिलो दिन शुक्रबार २० लाखको ओपनिङ गरेको थियो । राजधानी र मोफसल टेरिटोरीका ३५ मल्टिप्लेक्स र सिंगल थिएटरका पर्दाबाट सिनेमाले यो कलेक्सन गरेको हो । क्यूएफएक्सले ११ सोज र बिग सिनेमाज्ले दुई दिनमै नौ सोज दिएका छन् । पोखरामा ‘लुट’ हटाएर बाराही र श्रीकृष्ण मल्टिप्लेक्समा प्रदर्शन थालिएको छ । ‘चपली हाइट’को यो समीकरणमा मोफसलको ३५ र राजधानीको ६५ प्रतिशतको योगदान छ ।
‘लुट’ निर्माता नरेन्द्र महर्जन ‘चपली हाइट’का वितरक हुन् । ‘चमत्कारै भयो’ उनले भने, ‘सिनेमाले लगानी उठाइसकेको छ । भोलि (आइतबार)देखि सम्भवतः ड्रप भयो भनेपनि सिनेमा ब्लकबस्टर हुनेछ । हामीसँगै दङ्ग छौं कसरी चल्यो भनेर ।’ दर्शकमध्ये ९० प्रतिशत तन्नेरी छन् । ‘न कुनै स्टार र न कुनै बिग बजेट सिनेमाले भव्य गरेको छ’ उनले भने । सार्वजनिक विदाको दिन शनिबार बलिउडमा कुनै सिनेमा रिलिज नहुँदा पनि यसलाई राहत पुग्यो ।
आमिर गौतम, विनिता बराल र राज घिमिरे स्टारर सिनेमालाई दीपेन्द्र के. खनालले निर्देशन र अर्जुन कुमारले निर्माण गरेका हुन् । पपगायक सविन राई सिनेमाका केमियो हुन् । बायोपिक सिनेमा यौन मनोविज्ञानमा आधारित छ ।
फिल्म हेर्न आएकालाई कुटपिट
शुक्रबार बिहान कलेज पोशाकमा ‘चपली हाइट’ हेर्न गोपिकृष्ण हल पुगेका दुई छात्रालाई अभिभावकले कुटपिट गरेका छन् । चलचित्र विकास बोर्डले अनुगमनका क्रममा यस्तो घटना भएको बताएको छ । फिल्म हेरेर फर्किदा गेटमा ढुकेर बसेका बाबुआमाले उनीहरूलाई कुटपिट गरेको बोर्डले जनाएको छ । छात्रको नाम गोप्य राखिएको छ । ‘यो मर्निङ सोको विकृति हो’ सदस्य नीलहरि काफ्लेले भने ।